Kpachara anya na Intanet Ama | Martech Zone
Kpachara anya na Intanet a ma ama
Fraịde, Septemba 25, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu-ụka ole-na-ole gara aga, enwetara m email site n’aka nwanyị na-ajụ maka nke m Akwụkwọ na ịde blọgụ na SEO. Ọ bụ ntakịrị ihe email dị mwute - gụọ nwanyị ahụ chọrọ ịzụta e-Book m ejiri ọtụtụ ego na saịtị ebe a na-ekwu maka ya ma enwetaghị nsonaazụ n'oge gara aga. N’ụzọ na-eju anya, isiokwu ha gụrụ bụ nke m ji tọn ego tinye n’ebe ahụ.
The Internet Ama ebe ndi mmadu nwere di egwu ma nwekwaa ndeputa nke ndi mgbasa ozi. Ha kwuru na ihe karịrị ndị na-agụ akwụkwọ 50,000 kwa ụbọchị n'etiti isi iyi ha niile. Nke ahụ bụ ọmarịcha ndị na-ege ntị iji ruo! Na ndị na-ege ntị bụ akpụkpọ ụkwụ maka ngwaahịa m. Ọ bụ ebe ahụ: nku anya na ndị na-ege ntị. Ma ọ bụ?
Otu ọnwa mgbe post gwụchara ma enweghị m 200 ndị ọbịa si na saịtị ahụ. Nke ahụ bụ ndị ọbịa… ọ bụghị ntụgharị… naanị ndị ọbịa. N'ime narị ndị ọbịa abụọ, ọ nweghị otu onye zụtara e-Book ahụ. Achọtara m onwe m n'otu nsogbu ahụ nwanyị ahụ dere m. O mere mkpesa na ya ejirila ụyọkọ ego wee nata na ọ nweghị ndụmọdụ sitere na ndụmọdụ ọ bụla ugwo maka site na weebụsaịtị a na-ekwu. Weebụsaịtị sitere n'aka mmadụ Internet Ama.
Foto sitere na blọgụ Amit Gupta
My Theory na Internet Ama
Yabụ, jiri nke ahụ n'uche, yana nchịkọta nke Internet Ama ndị m maara ma ọ bụ na ha azụ ahịa, nke a bụ echiche m:
Internet ama ndị mmadụ dị mma n'otu ihe… na-eme onwe ha Internet ama.
Ọtụtụ n'ime ha anaghị arụ ọrụ n'ezie na ndị ahịa (na mpụga nke ndị chọrọ iku mmadụ Internet ama na enweghị atụmanya nke nsonaazụ). Otutu n’ime ha na-agbasi mbọ ike idobe anya na a na-agbasoro ha ma mara ihe karịa ndị ọzọ. Imirikiti n'ime ha na-adị ọsịsọ, nwee ọgụgụ isi, nwee ọgụgụ isi, bụrụkwa nna ukwu nke ihe doro anya. Ọtụtụ n'ime ha nwere azụmahịa akwụkwọ. Offọdụ n'ime ha na-arụsi ọrụ ike na-ekwubiga okwu ọnụ ọgụgụ iji mee ka ọdịdị ahụ pụta.
Ha chọpụtara na mgbanwe site n'ịrụsi ọrụ ike na nsonaazụ ya ịbụ naanị ịbụ Internet Ama bụ ụzọ dị mfe iji kpata ego. N'ihi gịnị? N'ihi na anyị chọrọ ụfọdụ ihe ọ juiceụ theirụ ha… anyị chọrọ ijikọ ụgbọ… anyị chọrọ ụzọ dị mfe, kwa.
Otú ọ dị, ọ dịghị mfe. Atụla anya inweta nsonaazụ mgbe ị tụbara ụfọdụ ego na Internet AmaCheta na ị na-enyere aka ime ka ha bụrụ ndị a ma ama. (Ma nke ahụ dịkwa mma, oke!)
Banyere Blog a
Ọ bụ ya mere m ji nwee mmasị miri emi banyere blọọgụ a na ndị na-ede blọgụ na ụgbọ (yana ndị ọzọ na-abịa). Anyị niile bụ ndị ahịa na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji melite ọganiihu nke ndị ahịa anyị. Blog bụ agụụ anyị, ọ bụghị uru anyị. Ikekwe otu ụbọchị anyị ga-apụ ma bụrụ Internet Ama. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ m, jide n'aka na dee banyere m ma jide m aza ajụjụ, ọ bụ ezie!
Banyere nwanyị, ezigara m ya otu Gingde blọgụ maka Dummies n'efu ma gwa ya ka ọ kwụọ ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na ọ baara uru n'akwụkwọ ahụ. Nke ahụ na-aga maka onye ọ bụla n'ime gị! Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, aga m enwe obi ụtọ izitere gị otu!
Tags: ịde blọgụịde blọgụ maka seoụlọ ọrụ ịde blọgụịntanetị ama
Old Marketer na New Marketer. Kedu onye ị bụ?
Inbound Marketing na Oru ohuru ohuru
Sep 26, 2009 na 3: 36 AM
Echere m na okwu ahụ na-aga "ihe niile na-egbuke egbuke abụghị ọla edo." Ọ bụ ihe ihere na enwere ndi si n’ebe na achoghi ijide n’aka na ngwa ahia ha na aru oru ha.
Sep 28, 2009 na 8: 27 AM
Ee, biko zitere m otu 25 Nzọụkwụ iji nwee ihe ịga nke ọma e-Book n'efu, m ga-ewere ya n'otu okwu ahụ.